Tun Tun's Photo Diary: Singapore Kite Festival 2014 & Thai Dinner
Circus act couple.
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က Marina Bay Sand နားမှာ လုပ်သွားတဲ့ Singapore Kite Festival ကို နောက်ဆုံးနေ. 24-Aug (တနင်္ဂနွေနေ.) မှာေ၇ာက်သွားခဲ့တယ်။ ဒီပွဲ က စနေ နဲ. တနင်္ဂနွေ ၂ရက်လုပ်သွားတာလေ။ ခါတိုင်း လည်း နှစ်စဉ် ကျင်းပပုံ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအကြိမ်မှပဲ ပထမဆုံးရောက်ဖူးတယ်။ ဒါတောင် သူငယ်ချင်းက ခေါ်လို.သိတာ၊ အစက လေတံခွန် တွေ ကို အထူးအဆန်းလုပ်လို. မသွားချင်ဘူး လုပ်နေတာ။ တကယ်ရောက်သွားတော့ တော်တော်စည်ကားပြီး စိတ်ဝင်စားဖို.ကောင်းတဲ့ ပွဲလို.ပြောရမယ်။ ဘာလို.လဲ ဆိုတော့ Marina Bay Sand ကနေ Raffle Place MRT နားထိ လမ်းတစ်လျှောက်လုံး street performer တွေ နဲ. တောက်လျှောက် ဖျော်ဖြေနေတာတွေ တွေ.ခဲ့ရတယ်။ မျက်လှည့်၊ ဆက်ကပ် နဲ. ရုပ်ထုလို လုပ်ပြီး ရပ်နေတဲ့ လူတွေ ဖျော်ဖြေတာ တော်တော်လေး ကြည့်လို.ကောင်းပါတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို. အခွင့်အေ၇းတွေ လဲ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီဖျော်ဖြေမူတွေ အပြင် တဖက်မှာလည်း လေတံခွန် အကြီးကြီးတွေ ကို အလှပြ ချိတ်ဆွဲပြီး ပြသထားပါသေးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လာလည်တဲ့သူတွေကို လေတံခွန် တခုစီ အလကားဝေပါတယ်။ ကျွန်တော် လဲ တခုရလိုက်တယ်။ တချို.တွေလဲ ရတဲ့ လေတံခွန်နဲ. ချက်ချင်းကို လေထဲ မှာ လွတ်တင်ပြီး ဆော့နေကျတာ တွေ.ခဲ့ပါတယ်။
ှုHave you ever been to Singapore Kite Festival before? This year festival took place at the outdoor area near Marina Bay Sand on 23 to 24 August. I think this is an annual event but this is my first time experience. When my friend called me to join this walkabout, I didn't feel like going because I thought it is nothing special to see people playing kites. But I was wrong. It is more thanakite. There arealot of street performers like magicians , circus acts and human statues performing non-stop on this event. A lot of photo opportunities for those how like photography. Beside performances, you can also see some gigantic kites along the street. The event volunteers pass free kites to everyone who come to this event and I got one for myself.
I have no idea how to fly this kind of kites?
ဒီလူ လုပ်ပြတာတော်တော်လေး ကြည့်လို.ကောင်းတယ်။ ကိုယ်လုံးပေါ် ဆီတွေသုတ်ပြီး ဘောလုံးကြီးထဲ ၀င်သွားတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ကိုယ်လုံး ဘောလုံးကြီးထဲကို ၀င်သွားပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ အကျီလဲပြီး ပြန်ထွက်လာတယ်။ ဘောလုံးထဲမှာ သူဝင်နေတဲ့ အချိန်မှာ အကျီ လဲ လိုက်တာပါ။ အံ့သြစရာ မကောင်းဘူးလား?
This guy is amazing. He put oil all over his body and go inside the balloon from head to toe. After that he came out from the balloon with new outfit of Superman & Elvis Presley. He changed new outfit while he was in the balloon.
I got goosebumps when he looked at me like this. Quite creepy. :P
ဒီလူ ကျွန်တော်ဓါတ်ပုံရိုက်နေမှန်း သိတော့ အဲ့လို တည်တည်ကြီးနဲ. ကြည့်နေတာ တမျိုး ကြီးပဲ။ ကြက်သီးတောင် ထလာတယ်။ :P
ပွဲထဲမှာ လည်လို.အားရပြီး မှောင်စပျိုးလာတော့ Raffle place MRT ကိုအပြန် လမ်းမှာ Marina City Link Mall ထဲက ထိုင်းဆိုင် (Absolute Thai) မှာ ညစာ စားခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းအစားအသောက်က မစပ်ပဲ ချိုချို အီအီ ဖြစ်နေလို. စားလို.မကောင်းပါဘူး။ သဘောင်္သီးသုတ်၊ ပတ်ထိုင်းနဲ. ပင်စိမ်း ကြက်သား ကြေ်ာတွေက ချိုချို ကြီးတွေ ချည်းပဲ။ ထမင်းကြော်လေး တခုပဲ စားဖြစ်တယ်။ ဆိုင်နာမည်မှတ်ထားတယ် နောက်ခါ ထပ် မစားမိအောင်လို.။ ဒါပေမယ့် ပုံလေးတွေ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ စားချင်စဖွယ်။ :)
After the sunset, we walked to Raffle place MRT to go home. On our way home, we ate dinner at Thai restaurant (Absolute Thai). I was shocked to learn that the foods were really awful. The papaya salad is too sweet as well as the Phad Thai and Basil chicken. It is pointless to eat Thai food if they are not spicy. I will take note of this restaurant and will not go there again.
at 9/03/2014 06:56:00 AM
Labels: Candid, Event, Food, Kid, Singapore, Singapore Food, Thai Food
ပန်းပွင့်ပုံမီးပုံး အရိပ်တွေ ကားတွေမှာအလင်းပြန်နေတာ ချစ်စရာ :) အကြိုက်ဆုံးက အစားအသောက်တွေပါပဲ မစားရပဲ ကြည့်ရတာနဲ့တင် စိတ်ချမ်းသာ :P